ग्रो व्यागमा , थोपा सिचाईको प्रयोग गरि यसरी गरौँ कौसी खेती – कृषक र प्रविधि
ग्रो व्यागमा , थोपा सिचाईको प्रयोग गरि यसरी गरौँ कौसी खेती
विश्वभर कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण लकडाउन भइरहेको छ। लकडाउनका बेला सबैजना घरमै बसेर सजिलै समय बिताउन सकिने कौसी खेति गर्नु आजको आवश्यक्ता हो। लकडाउनका कारण धेरै जसो मानिसहरु ज्यादै फुर्सदिलो भएका छन्। त्यसैले घरमै खाली बसेको बेला समयको सदुपयोग पनि हुने र तरकारी आपूर्ति वा पर्यावरणीय सौन्दर्य र घरको फोहर व्यवस्थापनको लागि पनि कौसी खती एकदमै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
के हो त कौसी खेती ?
ग्रो व्यागमा लसुन खेती तस्विर:NTS कौसी खेती
कौसी खेतीमा फूल
कौसी खेतीमा टमाटर
कौसी खेतीमा साग माथीका सबै तस्विरहरु NTS ले बनाएको कौसी खेतीका हुन् ।
खेती गर्ने जग्गा नभएकाहरुको लागि घरको वरिपरि, छत, बार्दलीमा तरकारी, फलफूल आदिकोको खेती गर्नुलाई नै कौसी खेती भनिन्छ । यस बारेमा सरकारी कृषि अनुसन्धान निकाय देखी निजीक्षेत्रका व्यावसायिक सस्थाले नयाँ प्रबिधि र शैलीको विकास गर्दै आएका छन्।कौसी खेतीकालागि उपयुक्त ग्रो व्याग, प्लाष्टिकका गमला, कम्पोष्ट मल, सिचाई प्रविधि पनि बजारमा पाईन्छ तसर्थ पहिलाको जस्तो फुटेको बाल्टी, असुहाउँदो आकारका माछाको क्रेट , माटोको भारी गमला , पानी हाल्नको झन्झट पनि हुदैँन । माटोका कारण घरको छतमा भार बढी पर्ने समस्याको समाधानार्थ अहिले माटोको साटो कोको पीटको प्रयोग गरि कौसी खेती गर्न सकिन्छ । यसका साथै बाल्टीबाट उघाउदै जगले
हरेक गमलामा पानी हाल्नुको साटो ट्यांकी बाट सिधै प्रत्येक गमला पानी पठाउने स्वचालित थोपा सिचाई प्रणाली पनि उपलब्ध छन् । यी प्रविधिहरु एकदमै प्रभावकारी र सस्तो पनि छन् । कौसी खेतीबाट विषादी रहित तरकारी सेवन गर्न सकिने साथै घर वरपरको खाली ठाउँ ,छत् ,कौसी आदि को उचित प्रयोग हुने, घरबाट निस्केको फोहोर र झारपातहरु कुहाएर मल बनाई प्रयोग गर्न सकिने,कसरतको माध्यम ,आर्थिक भार कम हुने,मन शान्ति हुने साथै प्रांगारिक खेतीको सिप र प्रविधि विकासमा सहयोग पुर्याउछ ।
आगामी एग्रीकल्चरले पोखराको चामेमा बनाएको कौसी खेती
कसरी गर्ने कौसी खेती ?
कौसी खेतीका लागि प्रसस्त घाम लाग्ने स्थानको छनोट गर्नुपर्छ। अहिले उपलब्ध प्रविधिका कारण तौलको चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईले गमला राद्यने ठाँउको छनौट गर्ने र कति गमला राख्न सकिन्छ भनेर अन्दाज गर्ने । छतमा पातलो फलामको स्टयाण्ड बनाएर विभिन्न तहमा ग्रो व्याग राखि कौसी खेतीको डिजाईन गर्न सकिन्छ । पानी लगाउने चिन्ता नलिनु होला किनकी अहिले तपाईको छतमा भएको पानीको ट्यांकीबाट सिधै गमलामा पानी दिन सकिने थोपा सिचाई प्रविधि उपलब्ध छ । टुटी खोले पछि पानी आफै सबै गमलामा समान रुपमा गैहाल्छ । केही समय पछि टुटी बन्द गर्दा भैहाल्छ । ग्रो व्यागमा कोकोपिट र प्रांगारिक मलको मिश्रण राख्ने र बेर्ना ल्याएर वा आफूले उमारेको छ भने बेर्ना रोप्न सकिन्छ । कौसी खेती सम्बन्धि सबै सेवा दिने व्यवसाय नै संचालित भएकाले तीनलाई पनि सम्र्पक गर्न सकिन्छ । अहिले शहरी क्षेत्रका वडाहरमा वडा कार्यालयले कौसी खेतीको तालिमको कार्यक्रम नै राखेका छन । तपाईहरुले आफनो वडा कार्यालयमा पनि सम्र्पक राख्न सक्नु हुन्छ ।
कौसी खेतीमा उर्वरताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
विरुवालाई मलको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा समय समयमा विरुवाको अवस्था हेरिकन मल हाल्नु पर्दछ । घरमा नै निस्किएको जैविक फोहरलाई कम्पोष्ट बीनमा हालेर तयार भएको कम्पोष्ट मललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी कम्पोष्ट बीन राख्नाले घरको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुन्छ भने कौसी खेतीको लागि मल पनि उपलब्ध हुन्छ । नपुगेको खण्डमा बजारमा उपलब्ध प्रांगाकि कम्पोष्ट मलको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
के बाली लगाउने ?
कौसी खेती गर्दा सकभर जरा कम फैलने तथा गहिराइमा सिमित हुने बाली उपयुक्त हुन्छ। लामो समय सम्म छिटो छिटो उत्पादन दिने र बोट धेरै नझांगीने बालि कौसीमा लगाउनु पर्छ। खेती गरिने स्थानको हावापानी अनुसारको बाली छनोट गर्नुपर्छ। गमलामा फल्ने जातका अंगुर ,अम्बा ,आप ,कागती मुन्तला,सुन्तला,स्ट्रबेरी लगायतका फलफूलहरु लगाउन उपयुक्त हुन्छ। साथै, खुर्सानी,भेडे खुर्सानी ,रायो,विभिन्न किसिमका सलाद पत्ता, बन्दा ,ब्रो -काउली ,गोलभेडा,सिमि,लसुन,प्याज ,रामतोरिया ,धनिया आदि लगाएतका तरकारी पनि कौसी खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ। तपाईलाई मनपर्ने जातका फूल पनि लगाउन सकनु हुन्छ ।
काठमाडौ आसपास र चितवनमा कौसी खेतीका लागि सम्पर्क
हेरचाह कसरि गर्ने ?
माटोमा रोग किरा नलागोस भनेर गाईको पिसाब, निमको झोल प्रयोग गर्नुपर्छ। बोटको छेउमा स(साना लट्ठी गाडेर साहारा दिनुपर्छ। बेलाबेलामा गोडमेल गरिदिनुपर्छ। लहरे बलिको लागि भने डोरी टागी दिनुपर्छ जसले गर्दा बोट राम्रो संग मौलाउन पाउछ र राम्रो उत्पादन दिन्छ। बिरुवालाई एकनासको चिस्यान चहिने भएकाले बढी सुक्खा र बढी पानि दिनु हुँदैन।
पोखरा वा सोको आसपासमा कौसी खेतीका लागि सम्पर्क
लेखक अर्घाखाँची टेक्नीकल ट्रेनीड स्कूलमा संयोजक हुनुहुन्छ ।
महामारी विरुद्ध लड्न सरकारलाई नामियाको सहयोग
कोरोनाको कहर र कृषि